Suldaan Siciid ?dhibaatadii jirtay lama xalin, mana dhaqan-gelayo heshiiskii shalay? (Dhegeyso) – Radio Daljir
Suldaan Siciid ?dhibaatadii jirtay lama xalin, mana dhaqan-gelayo heshiiskii shalay? (Dhegeyso)
Nofeembar 7, 2013 5:09 b 0
Kismaanyo, November 7, 2013 – Qaar ka mid ah isimada gobollada Jubbooyinka ayaa shirkii dib-u-heshiinta ee muqdisho ku soo dhamaaday ku sifeeyey mid aan hana-qaadi karin, waxay tilmaameen in habka loo maamulay shirka iyo soo xulista ergada ay ka mid tahay caqabadaha keenaya horusocod la?aanta.
Suldaan Siciid Diiriye oo ka mid ah cuqaasha Jubbooyinka, waxaa uu la hadlay idaacada daljir isagoo sheegay in dadka Jubbooyinka aysan ku kalsoonayn gebi ahaanba shirka, Diiriye ayaa xusay in abaabulkii shirka baaqyo kala duwan oo la jeediyey laga dul-booday.
?halkii boogtu taalay weli lama taaban, warqadaha la soo saaray maaha kuwa wax tari doona, waana adkaanaysaa dhaqan-gelinta heshiiskaas.? Ayuu yiri suldaan siciid, isagoo hadalkiisa ku sii daray ?waxaan hubnaa in aan laga wada-hadlin wixii la rabay in laga heshiiyo oo meelo kale loo jihaystay.?
Madaxweynaha Maamulka Jubba Axmed Madoobe ayaa guul taariikhi ah ku tilmaamay qoddobo ilaa lix ah oo lagu heshiiyey, kuwaas oo ka soo baxay shirkii dib-u-heshiisiinta Jubbooyinka ee shalay lagu soo xiray Muqdisho.
?Qoddobadii lagu heshiiyey waxay ahaayeen, baaq siyaasadeed, baaq nabadeed, baaq is-afgarad, waxayna dani ugu jirtaa bulshada Jubbooyinka, wararka suuqa wareegaya ma-naqaan meel ay ka socdaan.? Madaxweyne Madoobe ayaa sidaas ka sheegay Muqdisho.
Shirka oo muddo afar maalmood ah socday ayaa waxaa ka soo baxay baaq nabadeed oo loo jeediyey bulshada Jubbooyinka iyo heshiis la kala saxiiday, balse tan iyo bilowgii shirka waxaa soo baxayey dhaliilo iyo baaqyo loo jeedinayey dhinacyada shirka u fadhiya.
Dhegeyso: war-bixin arintaas ku saabsan oo ay diyaarisay Yaasmiin Cabdi Axmed oo daljir ka tirsan
Ra?isal wasaare Shirdoon oo maanta Muqdisho ku daah furay shir-weynaha qaran ee caafimaadka dalka
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 64-unug oo al-shabaab ay ku bur burisay Muqdisho bilihii tegay